Global Voices sy Ireo Sakafo Hariva Erantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2017 10:45 GMT
Indrindra indrindra rehefa tafiditra ny sakafo.
Noho izany, atombokay ny andiany iray amin'ny “Sakafo Harivan'ireo Blaogera ato amin'ny Global Voices”, izay hahazo laka foana isaky ny hoe misy aminay izay miasa ato amin'ny Global Voices no hanam-bintana handehandeha hitety izao tontolo izao.
Ny tanjona fitiavantenanay miaraka amin'ireo sakafo hariva dia ny hianarana bebe kokoa ny sehatry ny fanaovana blaogy eo an-toerana, mampifandray ireo endrika amin'ireo blaogy, maka namana vitsivitsy ary, raha azo atao, manatanteraka tafatafa sy fandraisampeo vitsivitsy. Inona amin'io no ho anao? Eny, mividy sakafo hariva izahay…
Hikarakara ireo sakafo telo voalohany ao Johanesbourg, Cape Town sy Amman aho, amin'ny faran'ny volana Jolay. Vonjimaika ny sakafo Jo'burg atao ny 20 Jolay, ny sakafo Cape Town atao vonjimaika ny 21 Jolay – amin'ireo tranga roa ireo, mety ho afaka hampiasa fanampiana aho hifidianana toerana iray sy hamantarana ireo blaogera matanjaka ho asaina.
Ny 28 Jolay amin'ny 7ora sy sasany hariva, ao Wild Jordan any Jabal Amman, ny sakafo harivan'i Amman – hanampy ahy hikarakara ilay fihaonana ny namako Isam Bayazidi (ilay lehilahy ao ambadiky ny Jordan Planet), ary hankafy sakafo matsiro izahay no sady mety hisitraka ny faravodilanitra tsara indrindra any Afovoany Atsinanana.
Amin'ireo tranga telo ireo, raha liana ianao ny handray anjara na hanampy ahy amin'ny fikarakarana, azafady andefaso teny iray aho eo amin'ny ethanzuckerman DOT com. Sokafy ny masonao ho amin'ireo sary, ho amin'ireo tantara ary ho amin'ireo tafatafa mikasika ireo sakafo hariva, mandritra ireo herinandro vitsivitsy ho avy.